७० प्रतिशत चिकित्सक केन्द्रमै, अझै ३५३ स्थानीय तह चिकित्सकविहीन – Rajdhani Daily
७० प्रतिशत चिकित्सक केन्द्रमै, अझै ३५३ स्थानीय तह चिकित्सकविहीन
काठमाडौं। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक र आधारभूत सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तह चिकित्सकविहीन अवस्थामा छन् । देशमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत काठमाडांैमा नै केन्द्रित छन् । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै चिकित्सक पुग्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले डाक्टरको दरबन्दी आफंै प्रदेशले सिर्जना गर्ने भएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । हामीले संघीय अस्पतालहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छौं । देशभरि ८ सय चिकित्सकहरू करार सेवामा कार्यरत छन् ।
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता, महेन्द्र श्रेष्ठ
चिकित्सकहरू संख्यात्मक रूपमा पनि न्यून छन् ।विशेषज्ञ चिकित्सले १ करोडभन्दा बढी रकम खर्चगरेर पढेका हुन्छन् । त्यही भएर पनि स्थानीयतहमा जान नचाहेको हुन सक्छ । ज्योति बानियाँ – उपभोक्ता अधिकारकर्मी
अहिले चिकित्सकहरू केन्द्रमा बढी भएको यथार्थ हो । हामी गाउँमा गएर काम गर्न पनि तयार छौं । तर, हामीलाई संघ मातहत रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो वृत्तिविकास र करियरमा धक्का पर्दैन । यदि स्थानीय तहले हामीलाई खटाउने स्थिति सिर्जना भयो भने हाम्रो वृत्तिविकास कसरी हुन्छ ?
– सरकारी चिकित्सक संघ, अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल पु¥याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले चिकित्सकको दरबन्दी आफंै प्रदेशले सिर्जना गर्छ । हामीले संघीय अस्पतालहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छांै । देशभरि ८ सय चिकित्सकहरू करारमा कार्यरत छन् ।’
हाल देशभर ३१४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार बिरामीहरूका लागि २३ स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा सो मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि बिरामीहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।
स्थानीय तहमा चिकित्सक किन जान मान्दैनन् ?
– पर्याप्त पूर्वाधारसहितको अस्पताल निर्माण नहुनु
– सेवा गर्ने भावनामा ह्रास हँुदै जानु
–कमजोर सरकारी नीति र कारबाहीको फितलो व्यवस्था
–विशेषज्ञ चिकित्सकको वृत्तिविकासमा राज्यले चासो देखाउन नसक्नु
–सेवाअनुसारको सुविधा नहुनु
– सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण सिर्जना नहुनु
कसरी हुन्छ समस्या समाधान ?
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिएर अघि बढ्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । पर्याप्त पूर्वाधारसहितका अस्पताल निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा सेवा अनुसन्धानसँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारण पनि अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार हुनुपर्छ । तर, जिल्ला अस्पतालमा त्यस्तो देखिएको छैन । ’ राज्यले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमा चासो देखाउनुपर्ने उनको जोड थियो । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको ‘करियर’का लागि प्रोत्साहन र पर्याप्त अवसरसमेत दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बाँनियाले स्थानीय तहमा अधिकार बाँडफाँट भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको बताए । उनले उपभोक्ताप्रति सचेत हुनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरू सुविधामुखी र सहर केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरू संख्यात्मक रूपमा पनि न्यून छन् । विशेषज्ञ चिकित्सहरू १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेर पढेका पनि हुन्छन् । त्यही भएर पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेको हुन सक्छ ।’
Tags: ७० प्रतिशत चिकित्सक केन्द्रमै
बैङ्कक । थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रेम तीनसुलानन्दको आइतबार ९८ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । हृदयघातका कारण उहाँको निधन भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । बैङ्ककमा रहेको फ्रा मोङ्कुत्...